Kobaca xogta iyo bixiyeyaasha tusmada waxaa horseed u ah maalgashiga ESG ee caalamiga ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kobaca xogta iyo bixiyeyaasha tusmada waxaa horseed u ah maalgashiga ESG ee caalamiga ah
Maalgashiga ESG wuxuu ku koray heerar aan horay loo arag sannadihii la soo dhaafay, taasoo wadatay dalab cusub oo ballaaran oo ku aaddan xogta/falanqaynta ESG oo dhammaystiran iyo sidoo kale ballaarinta tusmooyinka ESG si loo waafajiyo qaabab maalgashi oo kala duwan. Macluumaadka iyo bixiyeyaasha tusmada labaduba waxay xooga saarayaan qeybahan si ay ula jaanqaadaan isbeddelka ESG ee sida dhaqsaha leh isu beddelaya sida ku cad cilmi baaris cusub oo ay maanta daabacday Burton-Taylor International Consulting, oo qayb ka ah TP ICAP's Data & Analytics division, Parameta Solutions.
"Bixiyeyaasha Tilmaamuhu waxay wax ka qabanayaan baaqyada maalgashadayaasha si loo kordhiyo soo-gaadhista lacagaha ku xiran ESG, gaar ahaan kuwa xuddun u ah arrimaha cimilada, maaddaama joogtaynta la sii hor-mariyo safka hore ee walaaca bulshada," ayuu yiri Sean Eskildsen, oo ah falanqeeye Burton-Taylor. “Kobac xoog leh ayay u badan tahay inuu sii socdo sanadaha soo socda, in kasta oo tallaabada sharciyeynta iyo xaaladaha suuqa ee kala duwan ay tijaabin doonaan dareenka maalgashadayaasha qeybta,” ayuu raaciyay.
Adler Smith, oo ah falanqeeye ka tirsan Burton-Taylor, ayaa yidhi "Waxaa kaxeeya xiisaha maalgashadayaasha aan baahsanayn iyo dalabka warshadaha, bixiyeyaasha xogta maaliyaddu waxay diiradda saarayaan dhowaan bixinta alaabada iyo macluumaadka ka caawiya ka-qaybgalayaasha suuqa inay qiimeeyaan u-hoggaansanaanta ganacsiyada ee u-hoggaansanaanta deegaanka, bulshada, iyo maamulka," in "Dalabkaan loogu talagalay xogta/falanqaynta ESG wuxuu ka yimaadaa dhammaan dhinacyada suuqyada raasumaalka, laakiin ugu horreyn wuxuu ku urursan yahay dhinaca wax iibsiga."
Burton-Taylor ayaa maanta ku dhawaaqday daabacaadda laba warbixinood oo cusub oo ka hadlaya tusmada ESG iyo warshadaha xogta labadaba. Warbixinta Tusaha ESG waxay lafagureysaa dakhliyada adduunka ee bixiyaha waxayna siisaa aragti ku saabsan darawalada kobaca tusmada ESG. Warbixinta Xogta/Falanqaynta ESG waxay eegaysaa doorka sii kordhaya ee xogta/falanqaynta ESG ay ka ciyaareyso suuqyada raasumaalka iyo sida bixiyeyaasha xogtu uga falcelinayaan isbeddelka.
Todoba Knights 2 cusub ayaa bilaabay adduunka oo dhan oo leh lacag-la'aan…